Kartoonka “South Park” ee aflagaadeeyay Rasuulka (scw) oo aan laga daawan doonin Sweden | Somaliska
Shirkada majaajilada ee Comedy Central ayaa ogolaatey in aysan soo bandhigin qeyb ka mid ah kartuunkeeda caanka ah ee "South Park" kaas oo lagu soo bandhigay qof lagu sheegay rasuulkeena Muxammed (scw) oo wata suut. "Comedy Central waxay go'aan ku gaartay in aysan soo bandhigin qeybta kartunka ka mid ah. Waa go'aan aan qaadaney anagoo ka caga jiideyna" ayay ku sheegeen war murtiyeed ay soo saareen. "Amaanka shaqaalaheena ayaa noogu muhiimsan , waa sababta aan u qaadaney go'aankaan" ayay intaas ku dareen. Kartoonka lagu aflagaadeeyay rasuulka (scw) qeybtiisa 200-aad ayaa waxaa laga daawaday dalka Maraykanka 14kii bishii April, taas oo dhalisay hanjabaad ay u soo jeediyeen koox Muslimiin ah raga soo saaray kartoonka oo kala ah Matt Stone & Trey Parker. Hanjabaada oo lagu soo bandhigay bogga revolutionmuslim.com ayaa uga digtay raga sameeyay kartoonka "in ay ku dambeyn doonaan sidii Theo Van Gogh" kaas oo ahaa nin u dhashay dalka Denmark oo la dilay ka dib markii uu sameeyay filin lagu aflagaadeeyay Islaamka. Labada nin ayay u muuqataa in ay ka cabsadeen digniinta markii qeybtii labaad ee filinka ay ka jareen magaca nabiga (scw) iyagooo sawirkiina ku badalay midka Santa Claus. Qeybta kowaad ayaa waxaa lagu aflagaadeeyay dad fara badan oo ay ka mid ahaayeen nabi Ciise (cs). Qeybtaas ayaa waxaa daawaday in ka badan 3 milyan oo qof oo ku nool wadanka maraykanka, ayadoo hada dadka Iswiidhan ku nool aysan u suurto gali doonin in ay ka daawadaan televishinada. Waxaan ka soo xiganay The Local.
Shirkada majaajilada ee Comedy Central ayaa ogolaatey in aysan soo bandhigin qeyb ka mid ah kartuunkeeda caanka ah ee “South Park” kaas oo lagu soo bandhigay qof lagu sheegay rasuulkeena Muxammed (scw) oo wata suut.
“Comedy Central waxay go’aan ku gaartay in aysan soo bandhigin qeybta kartunka ka mid ah. Waa go’aan aan qaadaney anagoo ka caga jiideyna” ayay ku sheegeen war murtiyeed ay soo saareen.
“Amaanka shaqaalaheena ayaa noogu muhiimsan , waa sababta aan u qaadaney go’aankaan” ayay intaas ku dareen.
Kartoonka lagu aflagaadeeyay rasuulka (scw) qeybtiisa 200-aad ayaa waxaa laga daawaday dalka Maraykanka 14kii bishii April, taas oo dhalisay hanjabaad ay u soo jeediyeen koox Muslimiin ah raga soo saaray kartoonka oo kala ah Matt Stone & Trey Parker.
Hanjabaada oo lagu soo bandhigay bogga revolutionmuslim.com ayaa uga digtay raga sameeyay kartoonka “in ay ku dambeyn doonaan sidii Theo Van Gogh” kaas oo ahaa nin u dhashay dalka Denmark oo la dilay ka dib markii uu sameeyay filin lagu aflagaadeeyay Islaamka.
Labada nin ayay u muuqataa in ay ka cabsadeen digniinta markii qeybtii labaad ee filinka ay ka jareen magaca nabiga (scw) iyagooo sawirkiina ku badalay midka Santa Claus.
Qeybta kowaad ayaa waxaa lagu aflagaadeeyay dad fara badan oo ay ka mid ahaayeen nabi Ciise (cs).
Qeybtaas ayaa waxaa daawaday in ka badan 3 milyan oo qof oo ku nool wadanka maraykanka, ayadoo hada dadka Iswiidhan ku nool aysan u suurto gali doonin in ay ka daawadaan televishinada.
Waxaan ka soo xiganay The Local.
Ciid Wanaagsan! Barnaamijka munaasabada ciida. Nambar Qabso [DHAMAADAY]